Weerarro ka dhacay Muqdisho iyo hawlgallo ka socda gudaha Huteel Naasa Hablood 2 – Kasmo Newspaper
Weerarro ka dhacay Muqdisho iyo hawlgallo ka socda gudaha Huteel Naasa Hablood 2
Updated - October 28, 2017 5:26 pm GMT
London (Kasmo), Weerarro argagixiso oo xiriir ah ayaa galinkii dambe ee maanta ka dhacay Muqdisho, kuwaas oo midka hore loo adeegsaday gaari lagu qarxiyay afaafka hore ee Huteel Naasa Hablood 2.
Dhawaqa rasaasta ayaa laga maqlay gudaha Huteelka oo ku yaalla Degmada Xamar Weyne, waxaana la xaqiijinayaan geerida, ugu yaraan, 13 qofood iyo dhaawacyo, xilli ilaa 3 ka mid ah argagixisadu wali ku jiraan gudaha Huteelka.
Ma ahan markii u horreysay oo weerar loo gaysto Hutel Nasa Hablood 2 oo bishii Juun 2016kii 4 ka mid ah argagixisadii gudaha u galay ku sugnaayeen ilaa 4 saacadood.
Qaraxa 2aad wuxuu ka dhacay, 40 daqiiqo gudahood, agagaarka xaruntii hore ee Barlamaanka, oo isna loo adeegsaday gaari lagu qarxiyay goob la sheegay in ay ku sugnaayeen ciidanka Dowladda.
Warar an la hubin ayaa sheegaya qarax 3aad oo ku koobnaa ninkii is miidaamiyay, Afhayeenka Al-Shabaab, Cabdicasiis Abu Muscab ayaa laga wariyay in bartilmaameedku ahaa shaqaalaha Dowladda iyo Saraakiisha amniga.
Laba toddobaad oo qur ah ka hor, gaari xamuul ah oo lagu soo rarary walxaha qarxa ayaa 14kii Oktoobar sababay geerida 358 qof iyo dhaawaca 228 qof oo 122 ka mid ah xaalkoodu cuslaa, dibaddana loo qaaday.
Idaacad maxalli ah oo soo xiganaysa Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya ayaa sheegtay in 56 qof oo qaraxaas weyn ku lug lahaa la’yahay, taas oo laga yaabo in ay sii kordhiso khasaaraha dhimashada.